कोभिड-१९ परीक्षणमा झुटो पोजिटिभ र झुटो नेगेटिभको सवाल- विविधा - कान्तिपुर समाचार
लेखक मेडिकल एन्थ्रोपोलोजिस्ट हुन् ।
जेष्ठ १६, २०७७ डा.सचिन घिमिरे
स्वस्थ मानिसमा संक्रामक तत्व नभएको अवस्था प्रमाणित गर्न र अस्वस्थ मानिसमा रोग लगाउने संक्रामक तत्वको सही पहिचान गर्न प्रयोगशालामा परीक्षण गरिन्छ । प्रयोगशाला परीक्षणका लागि लिइएका नमुना पोजिटिभ देखिएमा संक्रामक तत्वको उपस्थिति छ र नेगेटिभ देखिए छैन भन्ने अर्थ लाग्दछ ।
यद्यपि प्रयोगशाला परीक्षणको दुनियाँमा कुनै पनि व्यक्तिमा रोग लगाउने संक्रामक तत्व छ भने पनि रिपोर्ट नेगेटिभ आउने र छैन भने पनि पोजिटिभ आउने थुप्रै कारण हुन्छन् । व्यक्तिमा रोग लगाउने संक्रामक तत्व भए पनि परीक्षणको क्रममा नदेखिनुलाई ‘फल्स’ अर्थात् झुटो नेगेटिभ भनिन्छ । संक्रामक तत्व नभएको अवस्थामा पनि प्रयोगशाला परीक्षणको क्रममा पोजिटिभ देखिनुलाई फल्स अर्थात् झुटो पोजिटिभ भन्ने गरिन्छ ।
प्रयोगशालामा सही तरिकाले परीक्षण गरेर आएको विश्वसनीय नतिजालाई साँचो अर्थात् ट्रू पोजिटिभ र ट्रू नेगेटिभ भनिन्छ । हाल नेपालमा भइरहेको प्रयोगशाला परीक्षणहरुमा एकपटक पीसीआर परीक्षणमा पोजिटिभ आएपछि पनि नेगेटिभ भनिएको उदाहरणहरु थुप्रै देखिएको छ । आरडीटी पोजिटिभ आएपछि पीसीआर परीक्षणमा नेगेटिभ आएका धेरै उदाहरण छन् ।
नेपालमा कोभिड–१९ बाट मृत्युवरण भएकी पहिलो महिलाको श्रीमान् तथा घर परिवारका मानिसहरुमा गरिएको परीक्षणमा पीसीआर नेगेटिभ आएपछिको अवस्थामा जनमानसलाई प्रयोगशाला परीक्षणको यो पाटोले रनभुल्ल पारेको स्थिति छ । सरकारले आगामी दिनमा कोभिड–१९ को फैलावट नियन्त्रण गर्न आवश्यक कार्यनीति बनाउने सवालमा पनि प्रयोगशाला परीक्षणको रिपोर्ट सही र वस्तुनिष्ठ हुन जरुरी हुन्छ ।
प्रयोगशाला परीक्षणको प्रयोग हुने किटहरुको गुणस्तरीयताको सवालमा चर्चा गर्दा सेन्सिटिभिटी अर्थात् संवेदनशीलता र स्पेसिफिटी अर्थात् विशिष्टताजस्ता दुई वटा पाटोहरुमा ध्यान दिइएको छ कि छैन विश्लेषण गर्नु महत्वपूर्ण मानिन्छ । प्रयोगशालामा प्रयोग हुने कुनै पनि परीक्षण किटको ९० प्रतिशत संवेदनशीलता छ भन्नुको अर्थ उक्त किटबाट परीक्षण गर्दा संक्रमण प्रमाणित भएका ९० प्रतिशत मानिसको साँचो पोजिटिभ नतिजा विश्वसनीय छ भन्न सकिन्छ । यदि कुनै पनि परीक्षणलाई ७० प्रतिशत स्पेसिफिक छ भन्नुको अर्थ परीक्षण गरिएका मध्ये ७० प्रतिशत मानिसहरुको रिपोर्टले साँचो नेगेटिभ देखाएको आंकडा विश्वसनीय छ भन्ने अर्थ लाग्दछ ।
कोभिड–१९ परीक्षणका लागि हाल नेपालमा चीनबाट खरिद गरेको तथा कोरिया, स्विटजरल्यान्ड, अमेरिका र चीनबाट नै अनुदानमा प्राप्त गरिएको ५ विभिन्न प्रकारका किटहरुको प्रयोग भइरहेको छ । कम्पनीहरुले आ–आफनो तरिकाले दावा गरे पनि पीसीआर परीक्षणको सही रिपोर्ट दिन सक्ने संवेदनशीलताको तह औसतमा ७० प्रतिशतजति हुने विशेषज्ञहरुको भनाइ रहेको छ ।
जति कम संवेदनशीलता भएको किट प्रयोग गरियो त्यति नै झुटो नेगेटिभको मात्रा बढ्दै जाने र समुदायमा सक्रिय संक्रमणको यथार्थ चित्रको अवगत गर्ने कार्यमा बाधा पुग्ने हुन्छ । फलस्वरुप सरकारले परीक्षण गरेजस्तो मात्र गर्ने र समुदायमा जोखिमको सही मूल्यांकन नहुने स्थितिले कोभिड–१९ को जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न कठिन हुन्छ ।
प्रयोगशाला परीक्षणका लागि नमुना संकलन गर्ने कार्य नै सही तरिकाले नहुँदा पनि झुटो नेगेटिभ रिपोर्ट आउने अवस्था रहन्छ । नमुना संकलनको समयमा प्रयोग भएका सामग्रीको गुणस्तरले पनि साँचो पोजिटिभ आउने वा झुटो नेगेटिभ आउने निर्धारण गर्दछ ।
सुरुको अवस्थामा मानिसको कोषमा भाइरल लोड बढ्दै जाने हुनाले पर्याप्त माात्रामा भाइरसको उपस्थिति नदेखिएको बेला पनि नमुना जाँच गर्दा झुटो नेगेटिभ रिपोर्ट आउन सक्दछ । नमुना संकलन गर्दा शंकास्पद व्यक्तिले हाच्छिउँ गर्न सक्ने डरले नाक वा घाँटीभित्र कपासनली सही तरिकाले प्रवेश नगराउनु र प्रवेश गराएमा पनि आवश्यक मात्रामा नमुना संकलन नगर्नु पनि झुटो नेगेटिभ आउने केही प्रमुख कारणहरु हुन् ।
नमुना संकलन गरेको सकभर २४ घन्टाभित्र परीक्षण गर्न नसकेको अवस्थामा वा संकलित नमुनालाई २ देखि ८ डिग्री सेन्टीग्रेडमा सञ्चय गरेर राख्न सकिएन भने पनि झुटो नेगेटिभ रिपोर्ट आउने गर्दछ । जति ढिला परीक्षण गरिन्छ वा कोल्ड चेन बक्सभित्र आवश्यक तापक्रमको व्यवस्थापन नहुँदा पनि झुटो नेगेटिभ आउन सक्छ । प्रयोगशालामा प्रयोग भएका उपकरणहरुको गुणस्तरले पनि साँचो पोजिटिभ र नेगेटिभ रिपोर्टहरुको गुणस्तर निर्धारण गर्छ ।
प्रयोगशाला परीक्षणको सिलसिलामा कसैको रिपोर्ट पोजिटिभ वा नेगेटिभ आएमा उक्त नतिजा साँचो पोजिटिभ वा साँचो नेगेटिभ नै हो भन्न पनि प्रयोगशालामा निश्चित मापदण्डहरुको अवलम्बन गरिएको हुन्छ । परीक्षणको गुणस्तरीयतालाई सुनिश्चित गर्न प्रयोग हुने आन्तरिक कन्ट्रोलको ग्राफ सही भएको प्रयोगशालाहरुमा मात्र साँचो पोजिटिभ वा साँचो नेगेटिभ रिपोर्टको विश्वसनीयता बढी मान्न सकिन्छ । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट पत्ता लागेका शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई अति छिटो पीसीआर परीक्षण गरिएको अवस्थामा उक्त व्यक्तिको कोषमा प्रशस्त कोभिड–१९ को भाइरस छैन भने पनि झुटो नेगेटिभ आउन सक्दछ । साथै, संकलन गरिएको नमुना परीक्षण गर्नुअघि लामो समयसम्म थुप्रिएर बस्यो भने पनि भाइरसको अनुवांशिक गुणमा क्षय हुन थाल्ने हुनाले झुटो नेगेटिभ आउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
रियल टाइम पीसीआरमा पनि कन्ट्रोल अर्थात् आन्तरिक रुपमा परीक्षणको नियन्त्रण गर्ने तत्वको प्रयोग नगरीकनै परीक्षण गर्दा पनि झुटो नेगेटिभ आउने सम्भावना बढी हुन्छ । प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा एक नमुनाबाट अर्को नमुनामा क्यारीओभर हुने समस्या अर्थात् कडा नमुनाको सँगै अर्को नमुना पर्न गयो भने कमजोर खाल्को झुटो पोजिटिभ रिपोर्ट आउन सक्दछ । झुटो नेगेटिभ आएका मानिसहरुमा कोभिड–१९ को संक्रमण हुन सक्ने र उनीहरुमा विकास भएको झुटो आत्मविश्वासका कारण अन्य व्यक्तिलाई संक्रमण सारेर समुदायमा फैलन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनकै अनुसार हाल प्रयोग भइरहेको एन्टिबडी परीक्षणले सार्स–कोभ–१ जस्ता अन्य प्रकारको कोरोना भाइरसको एन्टीजनसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गरेर पनि आरडीटी परीक्षणमा फल्स पोजिटिभ आउन सक्दछ । अन्य प्रकारको कोरोना भाइरसको एन्टिबडीको कारण प्रयोगशाला रिपोर्ट पोजिटिभ आएमा कोभिड–१९ को सवालमा भने उक्त रिपोर्ट झुटो पोजिटिभ ठहरिन पुग्दछ ।
लक्षण नदेखिएका र साधारण लक्षण देखिएका व्यक्तिहरुले थोरै एन्टिबडी निकाल्ने हुनाले पनि आरडीटी किटबाट यस अवस्थामा झुटो नेगेटिभ रिपोर्ट आउँदछ । आरडीटी किटमा पनि साँचो नेगेटिभ नतिजालाई यकिन गर्न सक्ने किटहरुमा कम्पनीअनुसार संवेदनशीलता फरक छ ।
हाल नेपालमा आयात भइरहेका किटहरुको गुणस्तर परीक्षण नगरीकन थौरै प्रतिशतको परीक्षण संवेदशीलता र विशिष्टता भएका किटहरुको प्रयोग गरेमा कोभिड–१९ को प्रयोगशाला रिपोर्टमा झुटो पोजिटिभ र झुटो नेगेटिभ आउने सम्भावनाहरु बढेर जाने हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र सीडीसीका अनुसार उक्त किटहरुको पुनः गुणस्तर परीक्षण गरेपश्चात् मात्र प्रयोगमा ल्याउनुपर्नेमा सरकारी नीतिले त्यसतर्फ गम्भीर ध्यान नदिएको देखिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले डिजिस सर्भिलियन्सका लागि अर्थात् समुदायमा कोभिड–१९ भाइरस कतिमा फैलिएको छ भन्ने थाहा पाउनका लागि मात्रै आरडीटी किटहरुको प्रयोग गर्न सकिने जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा चीनबाट पहिलो लटको आएको आरडीटी किटको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गुणस्तर मापन गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा कम संवेदनशीलता देखाएको तथ्य अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका छन् । वास्तवमा, जनस्वास्थ्य जोखिम नियन्त्रणको दृष्टिकोणमा झुटो नेगेटिभभन्दा झुटो पोजिटिभ कम खतरनाक हुन्छ ।
सरकारले समुदायमा कोभिड–१९ को सक्रिय संक्रमणको अवस्था पत्ता लगाउन संख्यात्मक रुपमा परीक्षणको दायरा वृद्धि गर्दै लैजानुका साथै गुणात्मक रुपमा पनि प्रयोगशाला परीक्षणबाट आएका रिपोर्टहरु भरपर्दो र सही नै हो भन्ने यकिन जनमानसलाई गराउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १४:४४
निको हुनेमा कपिलवस्तुका ४, बाँकेका ३ र दाङका १ जना
जेष्ठ १६, २०७७ दुर्गालाल केसी
दाङ — कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीको आइसोलेसनमा रहेका ८ जना कोरोना संक्रमित निको भएर शुक्रबार घर फर्किएका छन् । एक साता अस्पताल बसेपछि उनीहरुको स्वाब परीक्षण गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको अस्पतालका सदस्य सचिव डा. सर्वेश शर्माले बताए ।
दुई पटक परीक्षण गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि कपिलवस्तुका चार, बाँकेका तीन र दाङका एक जनालाई घर पठाइएको डा. शर्माले बताए । बिरामीहरुलाई अस्पतालमा फूल र खादा लगाएर बिदाई गरिएको थियो । उनीहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले एम्बुलेन्समार्फत घर फर्काएका थिए ।
बाँके नरैनापुर १ का १८, नरैनापुर ३ का २५ र नरैनापुर ५ का २० वर्षीय पुरुष निको भएर घर फर्किएका हुन् । यसैगरी कपिलवस्तु कृष्णनगर–२ का २९, कृष्णननगर ११ का २०, गान्धीनगर–३ का ४२ र शिवराज–११ का ३४ वर्षीय पुरुष पनि सञ्चो भएर घर गएका छन् । यस्तै गढवा–४ दाङका ३६ वर्षीय पुरुष पनि घर फर्किएका छन् ।
उनीहरु सबै भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेको बेला स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले राम्रोसँग हेरचाह गरेको र सञ्चो भएर घर फर्कन पाउँदा हौसला बढेको बिरामीहरुले बताए । अस्पतालमा ४५ जना कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार भइरहेकोमा अब ३७ जना बाँकी रहेको अस्पतालका सदस्य सचिव डा. शर्माले बताए । अस्पतालमा प्रदेश ५ का ६ जिल्लाका १८ देखि ४५ वर्षका बिरामीहरु रहेको उनले जानकारी दिए ।
प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १४:३०
अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाको खोप नेपाललाई उपयोगी
बहुउपयोगी युरिले झार